အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကော်ဖီဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်ပြီ.....
24 Responses to “ကော်ဖီဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်ပြီ.....”
ကျနေ်ာလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်သာတွင်းထဲပြုတ်ကျဖူးတယ်ဗျ
မမရေး ထားတာနဲ့ သွားသတိရသွားလို့
hee heee :P
အဲ ပထမရယ်ရုံပဲရယ်သွားမလို့ ..အပေါ်ကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်လည်းရယ်သွားလို့ အိမ်သာတွင်းထဲ ကျဘူးတယ် ထင်နေဦးမယ်ဆိုပြီး ပြန်ရေးရတယ်.. ဟဲဟဲ ရယ်ရတယ် ညီမလေးရေ... သနားလည်း သနားပါတယ်...ကိုယ်ဆိုရင်လည်း ရှက်မှာပဲ. :D
ကော်ဖီဆိုင်လေးပြန်ဖွင့်လို့ လာသောက်ပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့လည်း ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်နေသေးတယ်။
အိမ်ဘေးနားက ကလေး အိမ်သာခွက်ထဲ ပြုတ်ကျတာကို ပြန်သတိရသွားတယ်။
သူ့ အိမ်ကအိမ်သာက ဘိုထိုင် ခင်ဗျ။ ကလေးကလဲ အသက် ၆ နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာ။ အကောင်သေးသေး ညှက်ညှက်ကလေးရယ်။ အိမ်သာတက်ရင်း ငိုက်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ပြုတ်ကျပြီး..အော်ငိုပါလေရော.။ကျတာနာလို့ တော့ မဟုတ်ဖူးတဲ့.. ပြန်တက်တာ တက်လို့ မရလို့ တဲ့ ခင်ဗျ။ ဘိုထိုင်ထဲ ကွေးကွေးလေး ရောက်သွားတာ။ ခါးတစ်ပိုင်းလုံးက ခွက်ထဲကျပြီး ခြေနှစ်ချောင်းမိုးပေါ်ထောင် နေတာလေ။ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ .. ဟီးဟီး.. ။
အော်... ဒါမျိုးလဲ ဖြစ်တတ်ပါလား..နော်.. :P
ဟိ မကလဲ သမီးလိုဖြစ်နေပြီ မပြောဘူး မပြောဘူး ဘယ်သူ့မှမပြောဘူးနဲ့ လူထူတဲ့ဘလော့ဂ်မှာမှ ထုတ်ရေးတာ ဟားဟားးးးးးးးးးးးးးးးး
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ချော...ဪ ချောမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး...ပြောမှမပြောပဲဟာကို နော်...:)
ဘူဒုန်းကွ...နာ့အစ်မကို မလှဘူး ကြောတာ...ဘယ်နှယ်...ဒီလောက်စေတနာကောင်းတဲ့ အစ်မကို...ကော်ဖီတိုက်ပြီး အိမ်သာနံ့ ရှူခိုင်းထားတယ်...ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလိုက်သလဲ... :D
ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ပြောတဲ့ ဟာသလေးက လန်းတယ်ဗျာ။ ဟဟ
ကော်ဖီနံလည်းရဘူး။ ဟို မချောသယ်ရင်းမလေး သိရင်...
ဂတိတည်ပါတယ်။ ပြောမှ မပြောဘဲ။ ရေးပြတာဘဲ နော...
အခုမှဘဲ အိမ်သာကျင်းထဲ ပြုတ်ကျဖူးတဲ့သူတွေ ပေါ်လာတော့တယ်။းဝ)။
အမ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ အမတင်ထားတဲ့ ကောက်ဖီခွက်ကြီးကို ကျနော်က ကော်ဖီခွက်လို့ မမြင်တော့ဘဲနဲ့ အမသူငယ်ချင်း ချော်လဲပြီးပြုတ်ကျသွားတဲ့ နေရာကိုဘဲ ပြေးမြင်ယောင်နေလို့။း)
ရက်စက်ပေါ့ဗျာ သူငယ်ချင်းလေးတော့သနားပါတယ် သူ့အကြောင်း ဘကြိုင်တို့သိသွားပြီ
သွားတိုင်မယ် အဲသူငယ်ချင်းကိုရှာပြီးတော့ ဟိဟဟိ
သနားပါတယ်နော်.......။မသယ်ရင်း ကတော့သိရင် မကိုဒေါပွတော့မှာပဲ........။
Hi, Ma .....
When u help ur friend, ur hands and clothes would be dirty. When u went back to ur class, all students might feel bad smell. How did u clean it? How did u answer their questions? Could u take dinner well on that day? Could u sleep well that night? ......... :P
Su Lay said...
ဟဟ ကိုယ်လည်းကိုယ်တွေ့ ကြုံရတဲ့ဟာသလေးပြောခဲ့ဦးမှ။
တို့ ငါးတန်းတုန်းက အိမ်သာထဲကျသွားတဲ့ (ကျောင်းမှာ အပြင်ထွက်ရင်ကိုင်ရတဲ့ ထွက်ခွင့်ကတ်ကြီး) ကို အီးတုံးတွေ ဘောလော ဘောလော ထဲမှာ လိုက်ကောက်ဖူးတယ်။ ဟိ :P
ကတ်ကိုမမိပဲ အီးတုံးဖမ်းမိလို့ ကိုင်ဖူးတယ်သေးတယ်။ ဝေါ့ .....အန်တောင်အန်ချင်လာပြီ။
ရေးရင်းနဲ့ တောင် အနံရလာသလိုပဲ ဟဟ။
အဲ့နေ့ တစ်နေ့ လုံး ကျောင်းမှာ အီးပေလက်ကြီးနဲ့ နေခဲ့တာလေ။ ဟဲဟဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ပြောပြထားပြီ ချိန်းလည်းချိန်းခြောက် ထားတယ်။ နင်သူများသွားပြောရင် ငါအီးပေလက်ကြီးနဲ့ နင့်ကိုကိုင်ပစ်လိုက်မှာနော်လို့ ။ ဟိုကကြောက်လိုက်တာ သေတော့မယ် သူ့ ကိုကိုင်မှာကို။မပြောရဲဘူး ဘယ်သူမှ။နောက်မှအတင်းချရင်တော့မသိဘူး ဟဟ။ နေ့ လည်ထမင်းစားချိန်တောင် သမီးထမင်း ဇွန်းနဲ့ စားမှာကို ဇွန်းတောင်ပေးမကိုင်ဘူး။ သူခွံကျွေးတာဟ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်သား ငါနင့်ကိုကိုင်ပစ်လိုက်မှာနော် ဆိုပြီးတအော်အော်နဲ့ ထမင်းခွံကျွေးနေကြတာ အခုပြန်တွေးမိရင်ပြုံးချင်စရာလေး။ သိပ်အရမ်းခင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘ၀မှာအမှတ်တရလေးတွေပေးခဲ့တာပေါ့။ အမသူငယ်ချင်းလည်းအမှတ်ရနေမှာပါ။ နောက်ပြီးညစ်ပတ်ခဲ့တာရှိသေးတယ်။ အဲ့ခွင့်ကတ် သမီးနဲ့ သမီးသူငယ်ချင်း ဘယ်တော့မှ ယောင်လို့ တောင်မတို့ တော့ဘူး။ သူလည်း အီးပေ ကတ်ကြီးလေ...ဟဲဟဲ။ သမီးက တစ်ရက်တည်းအီးပေပေါ့။
ဟိုက......။ သမီးတို့ နုံခဲ့ပုံများ နောက်တစ်ခေါက်သူများခွင့်ကတ်ကိုအိမ်သာကျင်းထဲကျမှပဲ သိရတော့တယ်။အဲ့တစ်ယောက်က သမီးလိုအာဂသတ္တိခဲမဟုတ်တော့ သူကဆရာမကိုသွားပြောတယ်။အိမ်သာထဲကျသွားတယ်လို့ ။နောက်မှသိတယ် အဲ့ဒါ ပိုက်ဆံလေး၂၀၀လောက်လေးနဲ့ (ဟိုးတုန်းကပေါ့)ပြန်လုပ်လို့ ရတဲ့ဟာကို ဘ၀နဲ့ ချီတဲ့အတွေ့ အကြုံနဲ့ လဲခဲ့တယ်။ဟဲဟဲ။နည်းတဲ့အတွေ့ အကြုံမှတ်လို့မှတ်ထားကြနော်။ အဲ့ကတ်ကိုကိုင်လိုက်ရတဲ့ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတို့ ...... စောရီးပါနော် :P